Dinika momba ny lalàm-pifidianana : “Tsara manatrika ny rehetra”, hoy ny Ceni | NewsMada
Dinika momba ny lalàm-pifidianana : “Tsara manatrika ny rehetra”, hoy ny Ceni
“Raha mampiantso momba izay handinihana momba ny lalàm-pifidianana izay ny governemanta, tsara ny hihazakazahan’ny rehetra mandeha amin’izay.” Izay ny nambaran’ny
filohan’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni), Rakotomanana Hery, taorian’ny fihaonan’ny Ceni tamin’ny firaisamonina sivily teny Alarobia, omaly.
Nodinihina tamin’izany ny momba ny lalàm-pifidianana. Teo koa ny famaritana ireo faritra ipariahan’ny firaisamonina sivily tsirairay avy manerana ny Nosy sy ny fanomanana ny fanavaozana isan-taona ny lisitry ny mpifidy, taona 2017-2018.
Amin’izay fihaonana izay no hijerena raha mifanitsy amn’ny volavolan-kevitra nalefan’ny Ceni sy izay hatolotra any amin’ny komity iraisan’ny minisitera, izay hanao ny fandrafetana ny volavolana lalàm-pifidianana alohan’ny handefasana azy any amin’ny filankevitry ny minisitra.
“Tian-dry zareo harafitra miaraka amin’ny olona izany; amiko, tsara izany”, hoy izy. Amin’izay no ahazoan’ny rehetra mijery hoe: hatraiza ny torohevitra izay natao tamin’ny fakan-kevitry ny Ceni no tafiditra amin’ny mialohan’ny volavolana lalàm-pifidianana nataon’ny komity iraisan’ny minisitera?
Raha namoaka ireny volavolan-kevitra rehetra ireny ny Ceni, izay alefa any amin’ny governemanta: mihaino ihany koa ny hevitry ny olon-drehetra. Izay hevitry ny olon-drehetra izay no nalefa any amin’ny governemanta, araka ny nambarany.